Mpanamboatra kitapo ambongadiny A4 sy mpamatsy | Sheerfond
Miaraka amin'ny asa aman-draharaha sy ny fampivoarana ny vokatra elektronika dia mila mitondra zavatra be dia be isika rehefa mivoaka handray anjara amin'ny fivoriana sy hetsika hafa, toy ny solosaina finday, solosaina, telefaona, karatra, banky elektrika, tariby mametra, sns. ., zavatra maro no arotsaka ao anaty kitapo, izay tena mikorontana tokoa Eny, namokatra vokatra afaka mandamina tsara ny vokatrao izahay ary mitondra traikefa mahafinaritra ho anao
Kitapo fitehirizana orinasa, ento amin'ny asanao izany, afaka mamaly ny be ilainao izy, manana andraikitra maro izy, avelao aho hanao lisitra azy:
1. Ity kitapo ity dia avo lenta, rendrarendra ary miloko tokoa, indrindra mety amin'ny fivorian'ny orinasa.
2 Izy io dia vokatra vita amin'ny hoditra PU izay sariaka tontolo iainana, mifanaraka amin'ny fenitra ROHS ny fitaovana rehetra.
3. Izy io dia miaraka amin'ny banky herinaratra finday, 10000mAh, hahazoana antoka fa voaloa ny telefaoninao rehefa any ivelany ianao. Ary miafina ny seranan-tsambo fiampangany, io koa no volavolanay misy patanty. Tsy misy fiatraikany amin'ny endrik'ilay vokatra mihitsy. Raha tsy lazainay aminao ny toerana misy ny seranan-tsambo fampandoavana ao amin'ny boky torolàlana, dia mety tsy ho hitanao izany.
4. Charger tsy misy tariby izy io, raha mbola misy finday fampiasan'ny findainao, azonao atao ny mampiasa ny famandrihana tsy misy tariby.
5. Izy io dia manana kitapo finday, ny telefaona finday dia azo apetraka ao anaty mora be.
6. Izy io dia afaka mitazona solosaina 13-inch,
7. Afaka mametraka taratasy antontan-taratasy A4 izy io. Izy io dia miaraka amin'ny takelaka A4
8. Manana mpihazona finday izy io, azo apetraka eo amboniny ny telefaona hijerena sarimihetsika.
9. Manana paosy karatra izy, izay mahazaka karatra marobe.
10. Manana mpihazona penina izy io.
11. Azo ovaina izy io, ary ny poketra sy ny notepad dia azo ovaina araka izay itiavany azy.
Efa nanolotra fampiasa maro dia maro aho, noho izany dia miresaka momba ny fampiharana lehibe indrindra ao aminy aho:
1. Mora ampiasaina amin'ny fivorian'ny orinasa, ary mampiditra asa maro hanamorana azy kokoa ho anao.
2. Amin'ny maha-fanomezana ara-barotra azy, fanomezana ambony indrindra izany.
3. Fanomezana lafo vidy ho an'ny namana.
fahan'ny 5V 2A
fahafahana 4000mAh / 5000mAh / 8000mAh / 10000mAh / 20000mAh
Haben'ny laptop 13-inch
Haben'ny taratasy A4
Famandrihana tsy misy tariby Gr5W
Sehatra fampiasana Pr Fanomezana Orinasa Vaovao, Fanomezana fitsingerenan'ny andro nahaterahana, Fetin'ny ray, Fetin'ny reny, fanomezana Thanksgiving
ara-nofo PU ， ABS
Color Mainty ， Grey ， fanao
haben'ny vokatra 325mm * 260 * 32mm
lanjan'ny vokatra 960g
fonosana habe 335mm * 270 * 40mm
boaty sary miaina 42cm * 35cm * 29cm
Isa isaky ny boaty 10 pcs
Milanja isaky ny boaty 13.5kg
Teo aloha: Fivarotana mafana - Notefadin'ny finday A5 tsy misy tariby finday - Gaoyuan
Manaraka: Magnetic mouse pad-grey
Fanomezana fitsingerenan'ny andro nahaterahana
Pr Fanomezana Orinasa Vaovao